Oppo nwere ike ịmalite igwefoto igwefoto n'okpuru afọ a | Gam akporosis
Kemgbe oge ndị a, inye ihe nlere kachasị mma bụ ebumnuche bụ isi nke ọtụtụ ndị na-emepụta ama ama. Maka nke a, e mepụtara ụzọ dị iche iche, dị ka 'igirigi notu', mmịpụta mmapụta iji melite ahụmịhe nlele na smartphones, ihuenyo mkpuchi, na ndị ọzọ.
Opozo abiala na uzo ohuru, ma odi iche. O nwere ike ibido igwe ohuru ohuru ya na igwefoto n'okpuru ihuenyo n’afọ a, na-ekpughe onye na-ewu ewu tip Ben Geskin site na akaụntụ Twitter ya.
Maazị Geskin kesara ihe oyiyi nke ama ama ama ama na ọkwa ọhụụ, ọ bụ ezie na ọ kwuteghị nkọwa ọ bụla gbasara ngwaọrụ ahụ. Otú ọ dị, enwere ike ịhụ nke ahụ ọnụ na-esote nwere ike ịbịa obere egwuregwu ma nwee egwuregwu yiri ụdị nke ngwaọrụ nwere igwe ese foto.
Afọ a OPPO ga-egosi smartphone na n'okpuru igwefoto ngosi? pic.twitter.com/JkKoliJiZS
- Ben Geskin (@BenGeskin) Nwere ike 11, 2019
Dị ka akara mkpisiaka n'okpuru ngosipụta, The ama ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-egosipụta igwefoto ọhụrụ n'okpuru ekwentị.
Ihe ịga nke ọma nke Oppo site na teknụzụ igwefoto ọhụụ ga-emeghere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-emepụta ama. Ọ ga - enyere ha aka ịchekwa ụdị okike nke ama.
Samsung na ụfọdụ ndị ọzọ na-emepụta ihe na-arụkwa ọrụ na teknụzụ yiri ya iji zoo igwefoto dị n'ihu.. Onye osote onye isi ngalaba R&D nke Samsung kwuru na "teknụzụ nwere ike ịga n'ihu ruo ebe oghere igwefoto adịghị ahụ anya, na-emetụtaghị ọrụ igwefoto n'ụzọ ọ bụla."
Ikike ole na ole metụtara igwefoto dị n'okpuru pụtara na ụlọ ọrụ ndebanye aha ụghalaahịa na mba ụfọdụ, mana ọ bụ ezigbo ihe ngosi na ha dị.
Enwere ọnwa ole na ole fọdụrụ tupu mmalite nke ngwaike ọhụrụ sitere n'aka ndị na-emepụta China, nke ga-abụ n'afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo nwere ike ịmalite igwefoto igwefoto na-egosipụta n’afọ a